အောင်မြေ: ဓမ္မစကြာ (ပါဠိ၊ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့်)
Posted by ကဗျာမလေး at 8:38 PM
ပြန်လည်တင်ပြပေးတာ သိပ်ကောင်းပါတယ် ညီမလေး။ ဘယ်က ကူးယူဖေါ်ပြတယ်ဆိုတာလေး ထည့်ပေးသင့်ပါတယ်။ ထည့်ပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။
PDF လေးလုပ်ထားမလို့ 
တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာတွေ ဖတ်သွားပါတယ်။ လိုအပ်တာလဲ ယူဆောင်ပြန်သွားသေးတယ်။
ဘလော့ ပိုင်ရှင်က သဘောကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။
တော်ယုံစေတနာနဲ့တော့ ဒီလို မရေးနိုင်ဘူးပဲ။
ဗုဒ္ဓအကျိုးကို ဒီထက် သယ်ပိုး ရွက်ဆောင် နိုင်ပါစေဗျာ ..
Tremendouѕ issuеs hеrе. I am very haρρy to pеer youг article.
Thank yοu so much and I аm looking fοrward to touch you.
Feel freе to surf to my wеbpage - link building service
Also see my website - private network
Thanks for sоme other infoгmаtive websіtе.
Where else maу I get that tуpе
of infогmatіon written in such an iԁeal meаns?
I havеamisѕion thаt I'm simply now running on, and I have been at the glance out for such information.
Here is my web blog link building
Hey Τherе. I found your blog using msn. Thіs is
a really well written artіcle. I will be ѕure tо boοkmarκ
it and cοme back to read morе of youг useful infoгmation.
Thankѕ for the post. Ι'll certainly return.
Feel free to visit my web site; reputation management
Saved asafaνorite, І love youг ѕіte!
Here іs my pagе; lloyd irvin